Ma iga caawin kartaa inaan ka soo qaato aalad Amazon keyword key free ah?
Si fudud u sheeg, haddii aad ku iibinayso Amazon - marwalba waa mid aad u badan in aad ku sameyso adiga, aad u badan si aad u maareyso, iyo aad u badan si aad ula socoto. Mararka qaarkoodna waxay noqotaa mid aan la maamuli karin, ugu yaraan iyada oo aan la socon raadin gaar ah iyo falanqaynta falanqaynta. Nasiib wanaag, waxaa jira kala duwanaansho kala duwan oo kala duwan oo laga heli karo helitaanka furan ee internetka - iyo hoosta waxaan doonayaa inaan kaa caawiyo inaad doorato qalabka muhiimka ah ee Amazon keyword. Si ka duwan sida makiinadaha raadinta waaweyn sida Google, lafdhabarka Amazon ee raadinta algorithm ayaa xitaa ku tiirsan cilmi-baaris qotodheer-badanaa sababtoo ah tartanka adag, iyo niches leh dhab ahaan xaddidan wax soo saarka kuwaas oo ku celceliya kumanaan iibiyeyaasha ka dib. Oo halkan waxaad ka helaysaa saddex caawiye oo internetka ah oo kaa caawiya hawsha - crear correo electronico para empresa. Waxay yihiin kuwa ixtiraamka u ah si aad u dooran kartid. Ka dib oo dhan, waxa kaliya ee aad adigu si aad u go'aamiso taas oo free amazon keyword keyword in aad u isticmaasho dukaanka-drop daminta.
Kormeeraha Muuqaalka Keyword
Kumbuyuutarku ma aha oo kaliya hal-ujeedo muhiim ah oo loogu talagalay cilmi-baaris tartan, laakiin baakad buuxda oo ah qaabab caqligal ah oo faa'iido leh. Marka laga soo tago qalabkii asaasiga ahaa ee muhiimka ah, Kormeeraha Keyword ayaa sidoo kale leh Qalab Tilmaameedka Tusaalaha ah oo kaa caawin kara fikradaha dhabta ah iyo talooyin waxtar leh oo ku saabsan ereyada ugu muhiimsan ee loo isticmaalo dukaamada dhabta ah ee Amazon. Tilmaame-barahan sidoo kale wuxuu bixiyaa Tijaabin Indexing, gacantaada ugu wanaagsan ee caawinta marka ay timaaddo baaritaanka dhabta ah ee wax walba oo jira iyo liiskaaga si fiican loo soo bandhigay. Sidaa daraadeed heshiisyadaada si fudud ayaa loo heli karaa dadka dhageystayaasha ah. Ugu dambeyntii, qalabkan muhiimka ah ee Amazon keyword wuxuu ku taageeri karaa ganacsigaaga ganacsigaaga Amazon Suggestion Tool (si aad u ogaato ereyada muhiimka ah ee dheeraadka ah iyo weedhaha), iyo sidoo kale Amazon Search Optimizer Tool (si aad u hubiso in aragtidaada raadinta lagu daro a shahaadada dhabta ah).
Qalab kale oo wanaagsan oo lacag la'aan ah Amazon keyword keyword, Ereyada Ganacsi ayaa muujinaya dhinacyadooda ugu xoogan marka ay timaaddo cilmi-baarista muhiimka ah iyo laga yaabee talooyinka ugu wanaagsan ee keywords caanka ah ee loo isticmaalo macaamiisha dhabta ah waayo, maalin walba raadi. Xaqiiqdu waxay tahay in fikradda muhiimka ah ee ay bixiso qalabkani uu ku saleysan yahay kaliya ammaaminta ciribtirka Amazon laakiin wuxuu daboolayaa xirmo guud oo leh macluumaad dhab ah iyo isticmaalka isbeddelka ku habboon bogagga kale ee macaamiisha, sida Walmart, Jet, iwm ( Keepa
Ugu dambeyntiina halkan ayaa soo socota qalabkii ugu dambeeyey, waqtigan ayaan kugula talin lahaa inaad tijaabiso software wanaagsan oo waxtar leh si loo qiimeeyo qiimayaasha Amazon, iyada oo aan la dhigin diiradda kaliya ee ku jirta ereyada muhiimka ah. Kadib dhammaantiis, qiimaha kormeerku waa nidaam isku mid ah oo muhiim ah oo loo baahan yahay in lagu xakameeyo dukaamo kastoo dukaamada la socda, dabcan, haddii aad rabto inay noqoto guul ganacsi dhab ah. Ka mid ah kooxaha ugu xoog badan oo ay bixiso Keepa, waxaad arki kartaa sawirada khidmadda taariikhda qaaliga ah, dejinta khidmadaha helitaanka ama qiimaha, sii gal macluumaadka tooska ah ee shabakadaada, u samee falanqeyn isbarbardhig ah, iyo sidoo kale ka fiiri heshiisyada ugu dambeeyay. Muuqaal kale oo gaar ah oo ay bixiso qiimeeye qiimeeya waa qiimeeynta taariikhda la heli karo ee daraasado kala duwan.